Happyplus Audiofile Rastafari 1971 | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Ny laharam-pehintaniny ary ny laharan-jarahasiny dia: 17.984172 Latitude, -76.805752 Longitude
Ny taranaka fitoraham-bato voalohany dia niainga tamin'ny làlana mankany amin'ny fahazavana, raha mbola nanofahofa tanana hatrany kosa ny taranaka ady
Avy eo, taona vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'i Bob Marley, nitsambikina tamina yacht nankany anaty rano any Karaiba ny yup Puppies nisotro toaka, nankany amin'ny feon-kira nalefan'ireo mpitora-bato.
Ny fofona maimbo feno fahasambarana dia teny amin'ny habakabaka foana, fa ny marina kosa dia nanohy nanohy ny diany ihany
5 taona niova fotoana tamin'ny firaketana ny taona 2021
Indray andro dia nandalina ny toetra mampiavaka ny reggae aho ary tsy nisy fomba mihitsy nanodidina an'i Bob Marley. Tsapako fa ny fanahin'ireo hira dia manan-danja kokoa noho ny fomba mozika tsotra kokoa. Tamin'ity fahatsapana ity dia mazava ihany koa fa tsy afaka nanoratra na namokatra reggae tena izy aho tamin'ny fiainako. Toy ny matetika tao anatin'ny fikarohana nataoko ara-tantara dia nahita lainga marobe izay niaraka tamin'ilay angano aho. Rehefa mandeha ny fotoana dia nilentika tao anaty mash modely ara-pientanam-po ny herin'ny mozika tena izy.
Avy eo hitako ny fitoviana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fikasana hanatona ireo hiran'ny Noely nentim-paharazana tamin'ny taon-dasa. Ary teraka ny hevitra andian-dahatsoratra miorina amin'ny hirako "Emotionplus Audiofile X-mas 1960". Ny tanjona dia ny tsy fanesoana ireo fihetsem-po taitra ao amin'ilay mpihaino ilay tany am-boalohany, fa mba hahatonga azy ireo ho marina kokoa amin'ny tononkira mitsikera. Ireo hira voalaza dia tsy alain-tahaka, fa ampidirina am-pahamarinana amin'ny tena maha-izy ahy.
Ny audiofiles dia misandoka ho horonantsary fanadihadiana ara-tantara ankehitriny, fa kosa mampatsiahy ny endrika fihetsem-po amin'ny hira na ny karazana mozika ary mandika azy ireo amin'ny fomba ankehitriny. Ankoatr'izay, miharihary ny laingan'ny lamina ara-pihetseham-po ao amin'ny tononkira toa fanadihadiana, nefa tsy manimba ny fihetsem-po amin'ny mozika. Soso-kevitra, ny hira "Tsy misy vehivavy, tsy mitomany" dia voatonona amin'ity tranga ity.